UML — MYSTERY ZILLION
June 2015 in Other
UML အကြောင်းသိချင်လို့ ပြီးတော့ Use Case diagram, Class diagram, Sequence diagram, Activity diagram သူတို့ကိုဘယ်လိုဆွဲရလဲ။ မြန်ာမလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်ကဖြစ်ဖြစ် ရှိသလား ?? သင်ပေးကြပါဦး... :-O :-O
မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ် မရှိပါဘူး။ Software Engineer ကို တတ်ထားတဲ့ computer သမားတွေ သိကြပါတယ်။
သူတို့ကို ဘယ်လိုဆွဲရသလဲ ဆိုတာကို သိဖို့အတွက် UML အခြေခံ သိဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော် UCSY (University Of Computer Studies, Yangon) တက်တုန်းကတော့ The Unified Modeling Language User Guide ကို ကျောင်းက သင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စာအုပ်ရှာဖတ်ပြီးလေ့လာလို့လည်း ရပါတယ်။ UML မလေ့လာခင်မှာ OOP ကို အရင်ဆုံး နားလည်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုလည်း ရှာပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
online မှာ ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ http://www.tutorialspoint.com/uml/ မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
UML ကို အဓိက software တစ်ခု စ မဖန်တီးခင်မှာ ဘာတွေပါမယ် ဘာတွေလုပ် စတဲ့ Analystis နဲ့ Program ကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲဆိုတာကို မတည်ဆောက်ခင်မှာ နားလည်အောင် ရေးဆွဲကြပါတယ်။
You can read this for introduction, unfortunately I decided not to continue writing advance topics in Myanmar. Anyway you can read the introduction and can able to get the basic concept of UML and actual implementation.